Shiinaha warqad guddi insole la eva soosaarka iyo Warshad | Wode
Waxyaabaha: Warqad dib loo warshadeeyay, xabag, xaashi eva ah
Midabka warqadda sabuuradda: casaan, casaan madow, caddaan
Midabka EVA: caddaan, madow, jaalle, OEM MAGAC.
Dhumucdiisuna: 1.0mm-2.0mm badanaa 1.25mm, 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm,
Cabir: 36 '' * 54 '', 40 "* 60", 1m * 1.5m.
Summad: eurotex, wodetex
Xabagta Adag (midka ugufiican), Koolo wadajirka ah (Kafiican Kan), ama Xabagta Biyaha Sida macaamiisha oo kale lamid ah.
Xirxirida: xaashida, 20sheets boorso kasta
1. Adag qallafsanaanta, adkeysiga biyaha, laabashada iyo xasilloonida.
Ilaalinta deegaanka, urta u adkaysata, neefsashada, kuma jirto maadada 'formaldehyde', biraha culus iyo walxaha kale ee waxyeelada leh.
Qoyaanka-cadeyn, biyuhu, raaxada nuugista.
Waxaa loo istcimaalaa kabaha gudaha, kabaha xilliga firaaqada iyo kiisaska ama waxaa loo isticmaali karaa in lagu tolo halbeegga dhismaha oo siibraac leh, gaar ahaan kabaha raaxada leh sida kabaha jimicsiga iyo kabaha leasure.
1, Badanaa waa 20Sheets per polybag waarta. (Sida macaamiisha looga baahan yahay)
2, waxaa lagu buuxin karaa santuuq alwaax ah.
3, Waqtiga la bixinayo: 7 ~ 10 maalmood gudahood oo loogu talagalay weelal buuxa
1. Tijaabooyin bilaash ah ayaa lagaa heli karaa markaad codsato. sida ku xusan baaritaankaaga.
2. Waxaan fiiro gaar ah u leenahay faahfaahin kasta oo yar oo laga bilaabo alaabta ceyriinka ilaa xakameynta kala duwanaanta midabka, illaa gaarsiinta iyo ka dib adeegga iibka.
3. 100% soo saaraha, alaab-qeybiye xirfadle ah oo daaha ka qaadaya daahyada.
Waxaan si xirfad leh u bixinay una dhoofineynaa macaamiil badan oo ka kala yimid adduunka oo dhan in ka badan 15 sano.
1.Miyaad xirfad ku leedahay qalabka daahyada?
J: Xaqiiqdii, waxaan nahay hogaamiyaha alaab-qeybiye kabaha. Wax soo saarkayada waawayn waa guddiga xaashiyaha aan caadiga ahayn, guddiga aan tolmo wanaagsan lahayn, guddiga shaashadda kiimikada, dhalaalka kulul iyo guddiga fiber.
2.Ma booqan karnaa warshadaada?
J: Haa, ugu soo dhawow. Waxaan leenahay qolka bandhig xirfadeed si aan u tusno alaabtayada oo dhan. Waxaan hubnaa inaad ka helayso Oo raadi sheyga aad jeceshahay.
3.Sidee baan ku ogaan karaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan alaabtaada?
Hore: Nonwoven guddiga insole la eva
Xiga: Fiber guddiga insole
Kabaha Xaashida Insole, Guddiga Insole oo leh Eva, Cirbadda Cirbadda Aan Dhicin, Dhar aan Xakameyn oo leh Eva, Maro Nonwoven Dahaarka leh Eva xumbo, Guddiga Waraaqaha Waraaqaha leh Eva,